I-Orquideana enhle yezivakashi - I-Airbnb
I-Orquideana enhle yezivakashi
Zapopan, Jalisco, i-Mexico
Ikamelo e-i-villa ibungazwe ngu-Monserrat
Indlu yezivakashi yase-Orquideana iyi-villa enhle egcwele ama-orchid nokukhanya! Le ndawo eyingqayizivele inombono wezinkuni. Indawo yokucima umlilo nokugeza ngeshawa ku-suite ngayinye. Indawo inokubukeka kwe-hacienda enomoya ofudumele waseMexico! Lena indawo yakho uma ufuna ukunqamula!
Indlu yezivakashi yase-Orquideana iyi-villa enhle egcwele ama-orchid nokukhanya! Le ndawo eyingqayizivele inombono wezinkuni. Indawo yomlilo & ukugeza neshawa ku-suite ngayinye. Indawo inokubukeka kwe-hacienda enomoya ofudumele waseMexico! Lena indawo yakho uma ufuna ukunqamula!
Uma ufisa ukuxhumana nemvelo le ndlu enhle ilungele wena. Uma ufuna ukuqinisa ingqondo, funda, uhambe emahlathini, futhi udle ukudla okunempilo kwaseMexico!
I-Bosque de la primavera (ihlathi lasentwasahlobo) kanye nePlaza Galeria (Mall)
Njengoba nje ukuqagela kufuna! Siyayihlonipha isifiso sezivakashi sokuba ngasese.
Itekisi kodwa ingcono kakhulu uma ungakwazi ukuqasha imoto
Lena indawo ekahle yokubalekela i-yoga!
ubusuku obungu-7 e- Zapopan
Hlola ezinye izinketho ezise- Zapopan namaphethelo